Kpọọ m mgbe ịpụghị Beta, Google Gears! | Martech Zone
Amaghị m na ihe dị n'ime heck ahụ Google Kwadobe maka ntọhapụ Beta ya, mana echere m na ha kwesịrị ịlaghachi na Alfa.
Amalitere m ịgba ọsọ Google Kwadobe ihe dị ka otu izu gara aga iji nwalee arụmọrụ na-anọghị n'ịntanetị nke ngwa dịka Google Reader. Achọpụtaghị m nsogbu ọ bụla na-agbakwunye mgbakwunye ahụ, mana n'ime izu ahụ m ga-amanye ịhapụ Firefox na-arịwanye elu.
N’ikpeazụ, nanị imeghe otu ibe (nke ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ikiri ihe na-adịghị n'ịntanetị) ga-eme ka Firefox friji. N'abalị ọzọ achọpụtara m ya mgbe m na-eji ya Yahoo Webmessenger. Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na ọ bụ Yahoo na-akpata nsogbu m. Taa m kwụsịrị iji ya ma ka nwee nsogbu. M nwere nkwarụ Google Kwadobe mgbe Firefox ga-ifriizi ọ bụla nkeji ole na ole na voila! Enwere m onwe m ọzọ.
Ndo, Google. Mee ka isi gị laghachi na ogige ahụ, nye iwu pizza, ma bepụ Kupọns ịhịa aka maka otu a - ha kwesịrị ịlaghachi ọrụ!
Jun 6, 2007 na 2:24 AM
Mgbe mụ na Gears na-egwuri egwu ngwa ngwa achọtara m ọtụtụ ihe dị ịtụnanya na-aga mana m tinyere ya na eziokwu ahụ m na-etolite nakwa na a ga-enwe nsonaazụ, emesịrị m iwepu ya dịka m nweela firefox tinye-ons arụnyere.
Achọpụtara m na Firefox n'onwe ya na-enwetabeghị ntụkwasị obi karịa ihe mgbakwunye ị nwere n'otu oge, ejighị n'aka ma ọ bụrụ na nke a na-echefu ma ọ bụ na-akwụsịkarị.
Jun 6, 2007 na 4:22 AM
naanị google nwere ume iji hapụ sọftụwia beta n'ọtụtụ buru ibu.
otu mgbe anyi gbalitere ịhapụ beta software na ọtụtụ saịtị shareware jụrụ ịnabata sọftụwia ahụ… na-ekwu na ọ nwere ike ibute nsogbu na igwe ọrụ.
Ma otu saịtị ahụ ga-abụ karịa obi ụtọ na-ebipụta beta stof si nnukwu ụmụ okorobịa 🙂
Jun 6, 2007 na 5:12 AM
Enweela m nsogbu yiri nke ahụ. Infact, akwụsịrị m iji Firefox… na ngwụcha amaara m na ọ bụ gia ma nkwarụ niile tinye-ons… iji gosi na ọ bụ nsogbu mgbakwunye, \_ n.
Jiri nwayọọ nwayọọ laghachi ndị ọzọ. N'ụzọ ụfọdụ Firefox ka na-botched. 🙂